Ruman Neupane 'Amant' Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Ruman Neupane ‘Amant’
कविता : मडारीएको उच्छृंखलता
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ मैले अझै बुझन सकीन मेरा जिबनका रसहरु, जुन जताततै पोखीएर छताछुल्ल भएका छन् । हार्दीकताले उनका ओठहरुले मेरो ओठ चुम्न खोज्दा, लालची मेरा हातहले र्सबत्र अंठ्याउन भ्याएका छन् ।
Posted in कविता	| Tagged Ruman Neupane 'Amant'	| Leaveacomment
कविता : जब कलमले अक्षर बोल्छ
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ सफलताहरु नक्षत्रमा टलपलाई रहँदा । म धर्तिमा एउटा त्यस्तो उचाई देख्छु । जहाँ भुभागहरु अत्यन्त समथर छन् । जहाँ गहीराईहरु बेमिसाल छन् । पिडा÷भोगाईका अनुप्रस्थ माध्यम भएर ह्ृदयमा ठोकीँदा शब्दहरुले,
कविता : ७६ बसन्त
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ सम्भाबनाको पार्कमा उभिएको बुढो सिमल ध्यानास्थ नियाल्ने गर्छु । उसका अधिर खुट्टाहरु, म जस्तै काँपिरहेछन् । कताकता, त्यसको बोक्रीएको सौन्दर्यता मलाई खबरदारी गर्न उभिए जस्तो ।
कविता : म त प्रेमि हुँ
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ बिस्फारित छाति भित्र अघोषीत चाहानाहरु लुकाएको थिए । एउटा प्रेमीको आडमा, आत्मबल भरिएको चिश्चल मुटु फुकाएको थिँए । सपनाहरु फिँजाएर, भबिष्यको गोरेटो निर्माणमा तिमीबाट, मातृबात्सल्य खोजेको थिँए । म त रहरहरु फुकाउँदै हिड्थे छाँया,
कविता : हामिले बिताएको दश बर्ष..
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ हेर्न मन लागेको छ । अदृश्य चित्रहरु नकोरीएका चित्रहरु । झन अज्ञात आकारहरु अनी नफस्टाएको भनिएको कारिगरी । ।।१।। उघे्रको दैलो हेर्न मन छ । बर्षैं नखुलेका ढोकाहरु चुहाउँदैछन् आज नियास्रोले आँशुहरु । ।।२।।
कविता : के पायँ ?आखीर गुमाए
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ तिमीलाई छुन खोजे, तिमीलाई रोक्न खोजे तर म चेतना सुन्य भए पर्दा उचालेर हेरे घाम चियाईरहेछ, मुस्कुराईरहेछ तर राफको म मा असर परेन, म स्तब्ध भए । तिम्रो झुकेको नजर लाई उठाएर मैले के गरे ? म … Continue reading →
कविता : मेरो आकार ! मेरो पहीचान ! तर देश द्रोही होईन
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ म पग्लिएको तातो धातु । जुन आकार तिमी दिन सक्छौ बनाउ मलाई सेमुराई, अनी चहकिलो धार हाल रेट्न सकँु मलाई बाध्ने जन्जीरहरु । म छरीएको बर्णमाला ।
कविता : तिमीलाई बनाउँदा बनाउँदै
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ कल्पना गर । तिम्रा आर्द्र आँखाहरु मैले कसरी सजाउने छु । तथापी, म चित्रकार होईन कदापी तिमीलाई बनाउन सक्ने । युगौं युग तिमीलाई फुल संझे ।
कविता : श्वेत छबि
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ एउटा छबि सुकोमल चरित्र मनमा । मनको साँधमा पुगेर बह बनेर पोखि दिन्छ । कहिले काँहि चिआउने गर । मनको ढोकामा छेल्लिएर । बतास बहन छोड्छ तब, शितलता आफै भित्र खोज्ने गर ।
कथा : प्रथम
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ छेवैको गिलास तानेर पानी पिए । पानी धेरै चिसो थिएन । स्वाट्ट एकै सासमा त्यसलाई रित्ताई दिए । म भर्खरै एउटा भयानक सपनाले तर्सीएर ब्यँझीएको प्राणी । शिथील अनी सपनामा भाग्दा भाग्दा थाकेको आत्मा । मुटुको तेज … Continue reading →
कविता : औशत माया र जिबन
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ अनुप्रास नमिलेको जिन्दगी बाँच्दै छु । कहिले काँहि पोखिन्छु सफेद पनामा । यादहरुको चपरा पल्टाएर, एक त्यान्द्रो खुसि खोज्दैछु । बिश्वास छैन? म त, बन्द जिबन भित्र दास भएको छु ।
रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’का केही हाईकुहरु
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ कुलेसो बग्यो खालि पारेर पानी अजुँली रित्तै । चोखो भो जल चेपुवा बाट भेल पिएर लाग्ने ।
Posted in हाइकु	| Tagged Ruman Neupane 'Amant'	| Leaveacomment
कथा : बिजुलीको सपना …..
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ म लोभी छु । तपाई पनी लोभ गर्नु हुन्छ । हामी लोभी छैं । राजाले पनी लोभ गर्छन । प्रजाको लोभ झन त्यसमाथी बड्छ । हामी दैनीक लोभ गछौं । दिनभरी किसीम किसीमको लोभ र्गछैं । लोभको … Continue reading →
कविता : सन्तानको भोक, मेरो अटोग्राफ
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ एक बटुक, पानीले मुख चोक्खाएर बिटुलो रात पखाल्दै छु, एक लोटा, सपना बोकी खडेरी शहरमा पोखाउदैछु,
कथा : भुईचाँलो: परीचित मृत्यु
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ एउटा जिबनले मृत्यु ढकढकाई रहेछ…. ढकढक मृत्युको ढोकामा ….ढकढक स्वर्गको ढोकामा । म एउटा सम्पादीत अशं आफ्नै पारामा गाँउदै छु । साँझ क्रमश एउटा भयानक रात तिर धकेलिदै छ । अनुदित हुँदै । एकछिन अघी सम्म बाहीर … Continue reading →
कथा : ‘कलेजी ब्लेजर’ कि आईमाई
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ Banquet hall बाट मध्य राती निस्कीएको थिँए । सुनसान भईसकेको थियो । गस्ती गर्दै हिडेका एक दुई प्रहरी र कालो सडकको छाती चिरेर दौडीने royal आकारका कारहरुले मात्र मलाई झस्काउँथे । भुतपुर्ब मेयर र सोसियल सेलीब्रेटी को … Continue reading →
कविता : म बेचिएर के भयो?
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ मक्कीएको हाड लिई म बाँचेको धेरै भयो । सस्तिएको भाउ माझ म बेचिएको धेरै भयो । मेरो अस्तित्व छारो भएनी स्वतन्त्र उड्न कहाँ सक्छु र । आफ्नै नृत्याङ्गनमा म चिप्लिएर के भयो ।
कविता : मेरो धरातल
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ तिमी अनि तिम्रो प्रतिबीम्ब तिम्रो उदाशिनता म केलाउँछु निस्फीक्री संग तर म खेल्दा खेल्दै हारीसकेको । झर्दा र्झदै फुल्न खोज्ने । अष्पस्ट पराजय, र्दुबोद मनस्थिति, अब, एक्लै धरातलमा उभीन सक्दिन ।
कविता : झमेलामा बुढो सहर
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ मैले आफ्नै गन्ती गर्न भुलेछु आफ्नै शहरमा । त्यसैलेत अतिशय सुन्दरता देखी टाढिएको छु । एक्लै निस्कन्छु जुरेथुवा बाट कफी पिएर । समय परिर्बतन भएको मेरो काठे शहरमा । म ब्यस्त हुन,
कविता : औसत माया र जिबन
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ अनुप्रास नमिलेको जिन्दगी बाँच्दै छु । कहिले काँहि पोखिन्छु सफेद पनामा । यादहरुको चपरा पल्टाएर, एक त्यान्द्रो खुसि खोज्दैछु । बिश्वास छैन? म त, बन्द जिबन भित्र दास भएको छु । कति समेट्नु भयहरु
कथा : त्यो सेतो घर
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ “अझै थपँ”, कोकीलाले कानमै आएर फुसफुसाई । “हुन्छ”, मैले टाउकाले मात्र ईसारा गरे । उसले हरीयो सिसीबाट मेरो गिलासमा सम्पुर्ण थोपा झरे सम्म झार्ने कोसीस गरी । “तपाईको साथीहरु आएनन्” ? उसले सोधी “सुपरभिजनको लागी बाहीर गएका … Continue reading →
कविता : म घुमाउछु त्यो घण्टाघर को सुई
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ कोलाहाल त्यो एक्कासी ठप्प भईदीयो । कालो बादल निरशताको छप्प छाईदीयो । आत्तीयर कति त्यहाँ ककर्श रागमा गाउदैछन् । मंगल धुनले ढाकीदीन बडो जोर लाउदैछन । फाटेको जमिन भित्रै कति पसे रे । अस्ताएन सुर्य त्यहा कति … Continue reading →
कविता : बिराम !
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ म निद्रामा छु गहीरो निन्द्रामा तिमी निन्द्रामा छौ अबचेतन अबस्थामा । चेष्टा गरे ब्यूँझाउन सजग होउ, बोधपुर्ण बन । तिमी बिना पटरीमा कुद्धै छौ । बनिबनाउ संरचना छोड्दैछौ ।
कथा : नकोरीएको रेखाहरु
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ १. “यो अत्याचार हो, तिमीले म माथी गरेको अत्याचार” । उ भन्दै थियो उ भित्रको ज्वालामुखी बिस्फोट हुदै थियो । निकीताको शिर उसको छातीमा अझै टासिएको थियो । उनको आखाँहरु बाट अघी देखी नै अबिरल अश्रुधारा बगिरहेका … Continue reading →
कविता : प्रेमको अभिव्यक्ति
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ झिँगटि घरको दलान छेउ उम्रेको एक थान प्रेम माथि मैले कबिता लेख्नै पर्छ । कुम्खा भित्र लुकेको माया हार्दिकता ताप्न निस्कदाँ हो, त्यति खेरै हो मैले उनलाई प्रेम गरेको ।
मनोबैज्ञानिक कथा : आत्मदहन
~रुमन न्यौपाने ‘अमन्त’~ To be absent from the god is to be present with the lord. the dust returns to earth. the sprite return to god who gave it. – vdiah दृश्य आफै बन्दै जान्छ… ‘सुन्यता हिड घाट तिर जाँउ’ … Continue reading →